Nagu saabsan - Xiamen Jingqi Rubber & Plastic Co., Ltd.
Waxaan u hoggaansanahay falsafadda ganacsiga ee "Macaamiisha Koowaad, Forge Ahead", anagoo raacaya mabda'a "Marka hore Macaamiisha" si aan u siino macaamiisheena adeegyo tayo wanaagsan leh.
Soo dhowee dareenkaaga!
Muujinta waxyaabo kala duwan oo ka mid ah badeecada loo yaqaan 'silicone' sida waafaqsan shuruudaha macmiilka, Waxaad dareemeysaa inaad xor u tahay inaad nala wadaagto wixii ku saabsan fikirkaaga, waxaan kaa dhigi doonnaa fikrad aad ku timi.
Warshadaha balaastigga ah ee Xiamen Jingqi waa naqshadeynta shirkad soo saareysa iyo qalabka jikada ee silikonka, saxannada barafka ah, hirarka rootiyada iyo hadiyado silikoon ah. Waxaan sii wadaynaa inaan hal-abuurnimo ka sameysanno nashqadaha badeecada.
Si joogto ah u sameynta qaab cusub oo alaab silikoon ah.
Kooxdayada waxaa hagayay Injineerka xirfadda leh ee leh khibrad kabadan 10 sano. Kaas oo ay soo abaabuleen hal maamule guud, 1 agaasime warshad, 1 maareeye, 5 kormeeraha badeecada iyo 3 qof iib ah 30 alaab caadi ah.